Halatra avolenta : 500 tapitrisa Ar ny iray kilaon’ny lakolosy, 2 hetsy Ar ny baiboly (NewsMada) | AEMW
Halatra avolenta : 500 tapitrisa Ar ny iray kilaon’ny lakolosy, 2 hetsy Ar ny baiboly (NewsMada)
Ankoatra ny halatra lakolosy ao Toamasina, lasibatry ny jiolahy koa ny baibolim-piangonana. Mitentina hatrany amin’ny 500 tapitrisa Ar ny iray kilao amin’ny lakolosim-piangonana iray raha 2 hetsy Ar kosa ny Baiboly iray. Fiangonana maromaro no efa lasibatr’ireo mpangalatra tao Toamasina…
Antony iray tena mampirongatra ny halatra lakolosim-piangonana ny fandrenesana fa mahatratra 500 tapitrisa Ar ny kilaon’ny lakolosy halatra iray raha vidin’ireo mpangalatra 2 hetsy Ar kosa ny Baiboly kristianina iray. Ho an’i Toamasina manokana, tsy mionona amin’ny halatra lakolosim-piangonana intsony ireo jiolahy fa mangalatra Baiboly ihany koa. Ireo mpivavaka mamonjy fiangonana ihany no mifampiraharaha amin’ireo jiolahy ka mamoaka ny Baiboly avy ao am-piangonana.
Lasa raharaham-pirenena mitovy amin’ny asan-dahalo any atsimo izay miteraka fikorontanan’ny fiaraha-monina ary hamoizana aina mihitsy aza ity resaka halatra lakolosim-piangonana ity. Voatery nanaovana lahadinika teo anivon’ny filan-kevitry ny minisitra, ny alarobia 16 aogositra 2016 lasa teo izany, araka ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Paza Didier Gérard nandritra ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny fitsarana ambony ao Toamasina.
Tsy maintsy tratrarina ny olona ao ambadiky ny halatra lakolosy
“Tsy maintsy enjehina ary tratrarina araka ny baikon’ny filoham-pirenena ny olona ao ambadik’ity halatra lakolosim-piangonana ity. Hanao vaindohan-draharaha ny zandarimariam-pirenena amin’ny fitadiavana ny olona ao ambadik’izany”, hoy ny fanazavan’ny Jly Paza Didier. Ho an’ny fari-piadidin’ny zandarimariam-pirenena ao Toamasina, miisa dimy ny raharaha momba halatra lakolosy nanaovana famotorana. Roa tao Analanjirofo, ny roa tao Brickaville ary ny iray niseho tao amin’ny Ekar Masimbavy Terezy ao Salazamay. Olona miisa telo no efa nidoboka ao amin’ny fonjan’Ambalatoavahangy. Mafy vava tsy mety milaza ny olona mpandray ny entana rahateo ireo mpangalatra ka izay no isan’ny mampanano sarotra ny fanadihadiana ity raharaha ity araka ny fanazavana.
Sajo sy Jean Claude
← « Raharaha Ambohimahamasina » : mandainga ve izany ireo mpiasan’ny IGE ? (NewsMada)
Faran’ny herinandro : nisesy ny haintrano, entana antapitrisany lasa lavenona (NewsMada) →